သဘာဝအတိုင်းပန်းနုရောင်သမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို မလိုချင်ဘူးလား? - Myanmarload
သဘာဝအတိုင်းပန်းနုရောင်သမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို မလိုချင်ဘူးလား?
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ် က 09:32 January 15, 2018
နှုတ်ခမ်းနီတွေအမျိုးမျိုးဆိုးတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းသားပေါ်က ဆဲလ်တွေပျက်စီးကာ ခြောက်သွေ့ကွဲအက်လာတက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နှုတ်ခမ်းသားက ပင်ကိုအတိုင်းပဲ ဆိုရင်တော့ နေမကောင်းတဲ့ လူမမာတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပင်ကိုအတိုင်း ပန်းနှ ရောင်လွှမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတချို့ကို ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းလေးအတွက် အဆင့် (၃)ဆင့်လိုပါတယ်နော်။
ပထမဆုံးနှုတ်ခမ်းသားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေနဲ့ အမည်းစက်များကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် အုန်းဆီနဲ့ ဆား လိုပါတယ်။ ဒီ(၂)မျိုးကို စားပွဲတင်ဇွန်း (၂)ဇွန်းစာစီ ယူပြီး သေချာမွှေပေးပါ။ မွှေပြီးပြီဆိုရင်တော့ နှုတ်ခမ်းပါးပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။ လက်ကလေးပွက်တိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ နှုတ်ခမ်းသားလေးက နူးညံလာမှာပါ။
ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း (၃)ဇွန်း၊ သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းနဲ့ အုန်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း တို့ကို သမအောင်မွှေပါ။ ပြီးရင်တော့ နှုတ်ခမ်းသားပေါ်မှာ လိမ်းလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးက စိုပြည်ကာ ပန်းနှရောင်လေးသမ်းလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးနည်းကတော့ ညဖက်မှာ ဗီတာမင် အီး ၁လုံးကိုနှုတ်ခမ်းသားပေါ်မှာ လိမ်းပြီး အိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရက်ခြားတစ်ခါ လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာစိုပြည်ပြီး လှပတဲ့ ပန်းနုရောင်နှုတ် ခမ်းလှလှလေးကို ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source – Mystyle Myanmar